I-Ultrasonics for the Spinning of Polymer Fibers - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-Ultrasonics ye-Spinning yama-Polymer Fibers
Ukutshala izinsimbi ze-polymer okusetshenziselwa izingubo zendwangu nezindwangu kuyindlela ekhethekile ye-extrusion, esebenzisa i-spinneret ukwakha ama-filaments amaningi aqhubekayo yokwenziwa. I-Ultrasonics ingasetshenziselwa izinhlobo ezahlukene zokuphenya: ezomile, i-jet-wet, ukuncibilika kanye ne-gel ukuphenya. Izinhlelo zokusebenza ze-Ultrasonic zihlanganisa Spinneret Cleaning, Ukuxuba, ukuqedwa, I-polymerization futhi ukucwilisa.
I-Polymer Ukuxuba Nokuthi Ukwelashwa Kwemithi
Ukuze i-polymer ukuba ihlungwe, kufanele iguqulwe ibe yisimo se-fluid. Ngakho-ke, ngaphandle kokuba i-polym iyancibilika, ichitheka noma iphathwa ngamakhemikhali ukuze yenze izidakamizwa ezisekelwe emzimbeni noma ezakhiwe nge-thermoplastic.
Kulesi sigaba amadivaysi ama-ultrasonic ama-Hielscher ukusiza nokusheshisa inqubo yokuqedwa, kanye ne ukusebenzisana kwamakhemikhali nama-reagents. Ngenxa yalokhu, izinhlayiya eziqinile ze-polymer zimiwe ku-solvent noma i-asidi. Lokhu kuhlanganiswa kungaphambaniswa nge-reactor ultrasonic noma kusetshenziswe ku-tank evuthayo nge-probes ye-ultrasonic, lapho izinhlayiya zichitheka ngokushesha ngenxa yezingubo eziphakeme ze-cavitational. Lokhu kudala isisombululo se-polym efana neyodwa. Sicela ubone ividiyo ngezansi ukuze kuboniswe ukuchithwa kwe-ultrasonic usebenzisa uhlobo lweprobethi ultrasonicator (UP200St).
Ukuqeda amandla munye wamandla amaningi okusebenzisa we-ultrasonication. Ividiyo ikhombisa ukuncibilikisa okusheshayo kwebummy emanzini ngokusebenzisa i-Hielscher UP200St.
I-Polymer Solution Degassing
Izixazululo ze-polymer ezingenamthetho, njenge-poly (p-phenylene terephthalamide) (i-PPTA), lapho i-sulfuric acid egxilile ingxenyeni ye-sulfuric futhi ijwayele ukungeyona i-Newtonian. Izixazululo zidinga i-degassing ukuqinisekisa ukuthi imicu eqhubekayo iphuma e-spinneret. Uma i-ultrasonics isetshenziselwa ukuxuba, i-homogenization noma ukuqedwa, kusiza i-degassing. Le vidiyo ngezansi ibonisa i-degassing / de-aeration yamafutha (real-time).
I-Deagssing of iziphuzo iyisetshenziswa esinamandla samadivayisi we-Hielscher ultrasonic. Ividiyo ikhombisa i-Hielscher UP200S ngesikhathi sokukhiqizwa kwamafutha.
I-Degassing of Amafutha isebenzisa i-UP200S ene-sonotrode S40
I-Spinneret iyi-plate die die multi-pored lapho i-polymeric fluid is extruded khona ukwakha izintambo eziqhubekayo zokwenziwa. Uma uphuma emapulazini amancane e-extrusion die, i-polymeric flux ye-viscous iqala ukuqinisa futhi amakhetho e-polymeric ngamanye ajwayele ukuvumelanisa fiber ngenxa yokugeleza kwe-viscous. Kuleli phuzu i-polymeri eqinile ingaqala ukwakha kanye nokuphuma kwe-orifice enhle, okwenza kube nokugeleza okuncane futhi ekugcineni kufakwe isiteshi se-plate esivinjiwe.
Ukuhlanza amapuleti e-fiber extrusion kusuka ku-polymer eqinile kuwumsebenzi onzima, njengoba iziteshi zomuntu ngamunye zijwayelekile kakhulu. Ama-proels ase-Hielscher ultrasonic asetshenziselwa ukuveza amapulethi afafaza ama-polymer fiber extrusion afinyelele emajetsheni amakhulu e-cavitational liquid, anamandla okwanele ukususa i-polymer eqinile nokungcola – kodwa okwanele ngokwanele ukuthi ungalimazi i-geometry enesifiso yamapillari we-spinneret. Lezi zinsuku kuyinzuzo enkulu, uma kuqhathaniswa nokuhlanza izinaliti, izintambo noma izinsimbi. Nakuba ukuhlanza izinaliti ngamathuluzi amahle, okudalwe ukuhlanza ama-capillaries amancane ukuhlanza okuphindaphindiwe kulimaza usayizi, ukuma kanye nokubushelela kwama-capillari. Okokugcina, isikhathi esidingekayo sokuhlanza ama-multi-channel spinnerets yisici esibalulekile sezindleko, futhi.
Ukuze i-acetate, i-triacetate, i-acrylic, i-modacrylic, i-polybenzimidazole, i-spandex noma i-vinyon i-solvent esetshenziselwa ukuqeda i-polymer ingasetshenziselwa ukuhlanza izinhloso. Kulesi simo i-shear cavitational izocindezela i-solvent ibe e-orifices iphinde ithuthukise ukuchithwa.
Ukuze i-polymers ekhanyayo, efana neyiloni, i-olefin, i-polyester, i-saran noma i-sulfar, ukwelashwa kokushisa ngaphambi kokuba i-sonication ingakusiza ukwenza i-polymer ibe yinkimbinkimbi. Le nqubo ebizwa ngokuthi ukushisa kwe-oven kunciphisa i-polymeri enzima ukuze idume. Ukuhlanzwa, amanzi (afika ku-25wt% phosphoric acid) noma amafutha angasetshenziswa njengendlela elula yokuxhuma emkhatsini weprobe ye-ultrasonic kanye ne-spinneret.
I-probe yohlobo lwe-sonication inamandla kakhulu kunokuhlanza amathangi futhi amagagasi ama-sonic aqondiswa ngokuqondile emaphethelweni wesiteshi se-spinneret. Lokhu kubangela ukuhlanza okujulile futhi okusheshayo. Iziteshi ezingashadile nama-pores, sincoma ukusebenzisa le I-UP100H nge-tip ecacile ye-MS2. Lokhu kuyisetshenziswa esisebenzisekayo esisebenza ngezandla noma esimi phezulu. Amapulangwe ama-pore spinnerets noma ama-extrusion die, the I-UIP1000hdT eneprojekthi ekhethekile ye-100mm ububanzi.
I-Ultrasonically Assisted Polymerization
Ukuze uthole izinqubo eziqondile zokuphenya, i-Hielscher pros ultrasonic kusiza ukuxhumana phakathi kwama-reactants kanye / noma ama-catalysts ngesikhathi sokwakhiwa nokupolymerization we-polymer, isib. I-polyester.
I-Ultrasonic Gel Processing
Lapho i-gel ihamba (isib. I-polyethylene, i-aramid), izigameko ze-ultrasonic zingasetshenziselwa ukwakha i-gel kanye ne-shear-thinning ye-gel ngaphambi kokususwa kwe-gel. I-shear cavitational iholela ekusebenzisaneni okuphansi kwesikhashana phakathi kwamaketanga e-polymer. Lokhu kubangela ukuthi i-viscosity ilahle – okudinga ukucindezelwa okuncane, okuvumela ukuba amafayili amahle ayenziwe noma ukukhula kwe-extrusion.
Ama-reactors ama-Hielscher ultrasonic ayindlela ephumelelayo yokusabalalisa izinto zokwakha, ezifana nokunye ngama-carbon nanotubes, oxides ensimbi noma Ama-pig. Ultrasonic cavitation iphula agglomerates at disperses the izinhlayiya homogeneously.
I-Ultrasonic Probes egxile ekuhlanjuleni okukhulu
Ukudaya okuthuthukisiwe kwe-Textile Fibre nge-Ultrasonics
I-Centrifugal Ultrasonic Reactor yokuhlukanisa
Ama-Ultrasonic Mixers for Drilling Muds kanye ne-Packer Fluids